Iwotshi eyenziwe ngamaphepha amaphephancwadi ahlaziyiweyo | Imisebenzi yezandla
Iwotshi eneemagazini zentengiso, iphepha lokurisayikilisha
UAlex Jimenez | | Ukuhonjiswa, Imisebenzi yasekhaya
Ngubani ongenayo iwotshi ekhaya? Ezi zixhobo ziyasinceda phawula ixeshaNgamanye amaxesha kubalulekile emntwini. Iiwotshi zibalulekile ukukukhokela kwindlela yesiqhelo yobomi nangona, ngamanye amaxesha, zikwenza ufune ukuziphosa ngefestile xa uvuka kusasa.
Ke ngoko, namhlanje ndikubonisa obu bugcisa buhle bokwenza ngokwakho Iwotshi yaseludongeni iphinde isetyenziswe kwakhona iimagazini zamandulo. Ngale ndlela, sithanda ukuphinda kusetyenziswe iphepha ngelixa ligcina okusingqongileyo.
Amaphepha angama-24 amaphephancwadi alinganayo.
Inkqubo yewotshi enikwe ibhetri.
Usiba okanye ipensile.
Umsonto omde okanye inaliti.
IiCD ezimbini eziselubala.
Qengqeleka onke amaphepha eemagazini ukwenza iityhubhu ezilinganayo. Ukwenza oku, sizinceda ngepensile okanye usiba.
Xa sinazo zonke iityhubhu ezenziwe, siya kuqhuba a Songa, ukuze kushiyeke 3/3, enye ijonge enye ezimbini.
Dlulisa inaliti ngentambo ukuya Joyina nje loo mpahla, kwaye ubophe iqhina ukuze lilungiswe.
Kufuneka siyenze le nkqubo nge zonke iityhubhu ukwenza iwotshi.
Siza kubeka enye CD ngaphezulu kwewotshi kunye nomnye ngasemva, ohambelana nemingxunya.
Siza kusika i isangqa sekhadibhodi enobubanzi obufanayo njengeCD kwaye siya kuyincamathela kuyo.
Okokugqibela, siya kudlula kwikhadibhodi ukubeka i indlela yewotshi.
Iinkcukacha ezithe xaxe - Iwotshi yecuckoo iwotshi
Umendo opheleleyo kwinqaku: Imisebenzi yezandla » Imisebenzi yezandla » Ukuhonjiswa » Iwotshi eneemagazini zentengiso, iphepha lokurisayikilisha
Imikhombe eyenziwe ngecocekile yangasese
Iibhokisi ze-pizza ezinamabhokisi, ukuphinda kusetyenziswe kwakhona i-smart